ठीक हो घनश्यामजी, काम गर्न सजिलो छैन! :: Setopati
शंकरप्रसाद अधिकारी जेठ २३
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भन्नुभएको थियो- सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गरेजस्तो काम गर्न सजिलो छैन।'
उहाँको अभिव्यक्तिमा आएका केही प्रतिक्रिया यस्ता छन्- 'यिनी पनि उही ड्याङको मूला रहेछन्, नसक्ने हो भने राजीनामा दिने, अर्को आएर गरिहाल्छ, मन्त्रीले चाहेमा र दृढता र कडाइसाथ काम गरेमा देखिने गरी काम गर्न सकिन्छ, 'काम गर्न नसक्ने लाचार र चुप मन्त्रीभन्दा आफ्नो दलको सरकारको कडा बौद्धिक आलोचक घनश्याम भुसाल नै ठीक' आदि।
'कार्यसम्पादन पुरस्कृत हुँदैन, किन काम गर्ने' र प्रशासनको माथिल्लो तहमा भरसक निर्णय गर्नु नपरोस् भन्ने भावना विकसित छ। निर्णय ढिला गर्ने वा माथिल्लो तहमा पन्छाउने प्रवृत्ति छ। ठूला आर्थिक कारोवारका निर्णय असल नियतले गरेको भए पनि विभिन्न झन्झट र जोखिम सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ।
कृषि मन्त्री नियुक्ति भएलगत्तै 'सरूवा जस्तो नचाहिने काममा मेरो संलग्नता हुने छैन' भन्ने भुसालको अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भयो।
यो लेखको सुरूमै प्रस्तुत कमेन्ट 'यो पनि उही ड्याङको मुला रहेछ' भन्ने उक्ति उक्त नियुक्तिले सत्य सावित गरेको छ।
चीनजस्तो स्थिर सत्ता भएको देशले १० प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको हो। 'म प्रधानमन्त्री भएँ भने नेपाललाई दस वर्षभित्र आजको चीन बराबर विकास गरेर देखाइदिन्छु' भन्ने उडन्ते भाषण गर्ने नेता पनि नेपालमा छन्। यस्ताले जनतामा अनावश्यक महत्वाकांक्षा बढाइदिन्छन्।
सुरूमा नेताको 'देवत्वकरण' गर्ने र पछि 'दानवीकरण' गर्ने आम नेपाली प्रवृत्ति छ। कुनै पनि नेता त्यो हदमा देवत्वकरण वा दानवीकरण गर्नुपर्ने गरी असल वा खराब हुँदैनन्। असल शासकीय प्रबन्ध गर्ने इच्छाशक्ति र इमान्दार प्रयास मात्र नेताबाट खोजिनु पर्ने हो। पाँच वर्षे सरकारको कार्यकाल भनेको असल शासकीय प्रबन्धको जग बसालेर जनविश्वास आर्जन गर्न मात्र पर्याप्त समय हो, चकाचौंध गरिहाल्न सकिने समय होइन। त्यस्तो जादुको छडी हुन्थ्यो भने विश्वमा यति धेरै विपन्न मुलुक किन रहन्थे!
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २४, २०७७, ०१:२८:००